हार्दिक श्रदान्जलि ट्याक्टर दु’र्घटना,एमाले जिल्ला अध्यक्षका छोराको मृ’त्यु – Paluwa Khabar
हार्दिक श्रदान्जलि ट्याक्टर दु’र्घटना,एमाले जिल्ला अध्यक्षका छोराको मृ’त्यु
अषोज २७, २०७८ बुधबार 61
बैतडी: महाकाली राजमार्गमा ट्याक्टर दुर्घ’टना हुँदा एकजनाको मृ’त्यु भएको छ । ट्राफिक प्रहरी पोष्ट सतबाँझ,प्रहरी जवान मोहन विष्टका अनुसार डिलाशैनीबाट सतबाँझतर्फ गइरहेको अन टेस्ट ट्याक्टर दोगडाकेदार गाउँपालिका ३ तारलमा आज बिहान करिब १ बजेतिर दुर्घट’नामा परेको हो ।
मृ’त्यु हुनेमा ट्याक्टर चालक बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका ३ का २३ वर्षीय योगेश पाल रहेका छन् । मृतक पाल नेकपा एमाले बैतडीका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र पालका छोरा रहेका बुझिएको छ । योगेशको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल बैतडी लैजाने क्रममा बाटोम मृ’त्यु भएको हो ।
सोही ट्याक्टरमा सवार रहेका डिलाशैनी ३ कै राकेश कोलीले हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन् । उनी सामान्य घाइते रहेका छन् । दुर्घ’टनाग्रस्त ट्याक्टर सडकबाट ५० मिटर तल खसेको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने जानकारि पाएका छौ
Prevयी नै हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए !
Nextखसी काट्ने बिबादमा बुवाले आफ्नै छोराको घाँटी का’टे
यस्ता छन् सिसिएमसी बैठकको निर्णय?
बरिष्ट संचारकर्मी दिनेश डिसीको पिताको निधन
प्रचण्डकाे प्रतिवेदनले कांग्रेसमा उत्साह